အလှပရေးရာ Archives - Achawlaymyar
ရငျသား သေးလို့ စိတျမကောငျးမဖွဈပါနဲ့ (ယောင်ျကြားလေး မဖတျရ)
ရင်သား သေးလို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ (ယောင်္ကျားလေး မဖတ်ရ) ရင်သား သေးလို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ရင်သား အလှဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ ယောင်္ကျားတွေ အတွက်လား? အဲဒီလိုတွေးလို့လဲ မရပြန်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မိန်းကလေး ပီသတယ်ဆိုတာကို ဖော်ကြုးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါ။ ဒါပင်မဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သားကသေးခဲ့ရင်ကောင်း ကောင်းချက်တွေရှိပါတယ်။ ( ၁ )ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ဂရုစိုက်စရာမလိုပါ။ ( ၂ ) ကားစီးတဲ့အခါ ခါးပတ်ပတ်ရင်လည်း သာသာယာယာပါပဲ။ ( ၃ )ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတွင်းခံလေးတွေကို ကြိုက်တာရွေးနိုင်တယ်။ ( ၄ ) ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ သူလေးက လိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ( ၅ ) Gym သွားကစားတော့လည်း … Read more
လှချင်ရင် မပျင်းနဲ့ (မိန်းကလေးတိုင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်နော်)…
April 17, 2022 by Achawlaymyar
အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ကျစ်လျစ်လှပစေမယ့် ဂျပန်က လူကြိုက်အများဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း (၅)မျိုး
အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ကျစ်လျစ်လှပစေမယ့် ဂျပန်က လူကြိုက်အများဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း (၅)မျိုး အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့၊ အသက်ကြီးတဲ့အထိ ကျစ်လျစ်လှပဖို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ မှ လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ ထိရောက်မှုအရှိဆံ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ပျိုမေတို့ လိုက်လုပ်ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) ခြေထောက်လွှဲလေ့ကျင့်ခန်း မာကျောတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မှောက်ခုံမှောက်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို နောက်ကျောဘက် ကွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ခြေဖနောင့်နဲ့ တင်ပါးနဲ့ ထိအောင် လွှဲပေးပါ။ တစ်နေ့မှာ အချိန်အနည်းငယ်လောက်ပေးပြီး အဲ့ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေလည်းပြေပျောက်စေနိုင်ကာ သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုလည်း ပိုကောင်းစေတာကြောင့် ခြေထောက်နဲ့ပေါင်တံကို လှပစေနိုင်ပါတယ်။ (၂) ကိုယ်နေဟန်ထားစမတ်ကျ လှပစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း မာကျောတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှဲအိပ်ပါ။ ခြေဖဝါးကို ကြမ်းပြင်ကနေ မကြွဘဲ ဒူးကိုကွေးပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ပြီး ဦးခေါင်းကို ကြမ်းပြင်ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း … Read more
April 5, 2022 by Achawlaymyar
မျက်နှာလေးက နုဖတ်နေတာပဲလို့ အပြောခံချင်ချင်သူများအတွက် ကိုယ်လိမ်းနေကျ ထောပတ်စေ့အကြောင်းလေးပါ။ အချိန်ရရင် ဖတ်ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့က ကိုယ့်အကိုတစ်ယောက်နဲ့ video call ပြောရင်း ဒီပို့စ်လေးရေးဖို့ စိတ်ကူးရတယ်ဆိုပါတော့….. ကိုယ့်အကိုအမတွေကို ကိုယ့်လိုလှစေချင်တဲ့စေတနာကတော့အဓိကပေါ့နော်….ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်အကိုအမတွေထဲမှာ မျက်နှာမှာ အဆီဖုလေးတွေ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် ဝက်ခြံ နဲ့ မျက်နှာအရေးအကြောင်းထင်တာတွေ တော်တော်များများတွေ့ရလို့ပါ ထောပတ်စေ့အကြောင်းလေးမပြောခင် ကိုယ့်အကြောင်းကို အရင်ပြောပါစေ…ကိုယ်ကတောသူပီပီ နယ်မှာနေတဲ့ တလျောက်လုံးသနပ်ခါးပဲလိမ်းပါတယ် ။ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ၃နှစ်ကျော်ကာလလေးအတွင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် Cosmetics ဝယ်လိမ်းဖူးတာဆိုလို့ Bella ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှ စုစုပေါင်း ၂ကြိမ်ရယ်ပါ …. ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကလဲ ခရီးသွားတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်ရတာ အဆင်ပြေလို့ပါ ကျန်တဲ့ရုံးချိန်တွေမှာတော့ သနပ်ခါးပဲအများဆုံးလိမ်းဖြစ်ပြီး ပွဲတွေရှိတဲ့အခါနဲ့ စိတ်ရတဲ့အခါကျရင် ကိုယ့်အမရဲ့ Cosmetics တွေယူလိမ်းပါတယ်…. သနပ်ခါးပဲလိမ်းလိမ်း မိတ်ကပ်ပဲလိမ်းလိမ်းညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ရေချိုးပြီးတာနဲ့ အမြဲလိမ်းဖြစ်တဲ့အရာ ထောပတ်စေ့ရယ်ပါ။ဝယ်ရတာလဲလွယ်ကူသလို … Read more
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က မလိုအပ်တဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို VASELINE နဲ့ ဖယ်ရှားလို့ရတယ်နော်…
April 4, 2022 by Achawlaymyar
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က မလိုအပ်တဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို VASELINE နဲ့ ဖယ်ရှားလို့ရတယ်နော်… လက်တွေ ခြေထောက် မျက်နှာပေါ်က မလိုအပ်တဲ့အမွှေးအမျှင်တွေက အမျိုးသမီးတွေအတွက် စိတ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှုတ်ခမ်းပေါ်က အမွှေးရေးရေးလေးတွေပေါ့။ တစ်ခါတလေ ဒီ အမွှေးအမျှင်တွေက ပျိုမေတို့ရဲ့ အသွင်ပုံစံကို သက်ရောက်မှု ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ အမွှေးအမျှင် တွေကို အလွယ်တကူ ရှင်းပစ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုကို ပြောပြ ချင်ပါတယ်။ ဒီနည်းက Vaseline ကို သုံးတဲ့ နည်းပါ။ ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာသလို သဘာဝပစ္စည်းများကိုပဲ အသုံးပြုထားတာမို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းမှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့… (၁) ကုလားပဲ အစိမ်းမှုန့် (၂) နနွင်းမှုန့် (၃) … Read more
ယနေ့ခေတ်ထိ အသုံးဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ရှေးခေတ်က အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်များ
April 1, 2022 by Achawlaymyar
ယနေ့ခေတ်ထိ အသုံးဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ရှေးခေတ်က အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်များ ဒီနေ့ခေတ်ထိ အသုံးဝင်ဆဲဖြစ်တဲ့ ရှေးခေတ်က အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်များ….။ အသားအရေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ဒိန်ချဉ်… ဒိန်ချဉ်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို ရှေုးတုန်းကတည်းက သိကြသည်။ ရှေးတုန်းက ချဉ်သွားတဲ့ နို့ခွက်ကို လက်နဲ့ သွန်ပြီး ဆေးကြောမိတဲ့အခါ နောက်နေ့မှာ ၄င်းလက်ဟာ နူးညံ့နေတာကို တွေ့ရင်း သူ့ရဲ့ အသားအရေအတွက် အသုံးဝင်ပုံကို သိလာခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဂေါ်ဖီထုပ်အရွက်များ ဒီ နည်းလမ်းကိုတော့ နို့တိုက်ကလေးမိခင်တွေ ရှေးနှစ်ပေါင်း ရာချီတည်းက အသုံးပြုလာကြတာပါ။ ရင်းသား နာကျင်ခြင်း၊ နီးရဲ ဖူးယောင်နေခြင်းများကို ဂေါ်ဖီရွက် အုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေသည်။ ကြက်ဥ မက်စ် ( ကြက်ဥမျက်နှာဖုံး ) ကြက်ဥ မက်စ် လုပ်တဲ့နည်းများ စွာရှိသော်လည်း လိုရင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ … Read more
March 18, 2022 by Achawlaymyar
ရကျရကျစကျစကျ သိသိသာသာကို အသားဖွူမွနျစတေဲ့ အာလူးပွုတျအစှမျး ဒီတဈခါတော့ ဈေးကွီးနာမညျကွီးတဲ့ အလှကုနျတှေ သုံးစရာမလိုဘဲ မကျြနှာအသားအရကေို သိသိသာသာ ဖွူဝငျးစနေိုငျမယျ့ မှျောဆနျဆနျ အာလူးပွုတျနညျးလမျးအကွောငျး မြှဝပေေးပါရစေ ။ ဒီနညျးလမျးလေးဟာ သငျ့မကျြနှာကို ခဏတာသာ ဖွူဝငျးစတောမဟုတျဘဲ ထာဝရဖွူစနေိုငျတဲ့ နညျးလမျးလို့တောငျ တငျစားကွပါတယျပထမဆုံး အာလူးကို ဆေးကွောပွီး ပွုတျလိုကျပါ ။ နူးသှားပွီဆိုလြှငျ အခှံခှာပွီး ကောငျးစှာ ကွိတျခွပေါ။ ပွီးနောကျ အရောအနှောမပါသော ဒိနျခဉျြ အနညျးငယျကို ထညျ့မှပေါ ။ ဒိနျခဉျြမရှိလြှငျ နှားနို့ ထညျ့လို့ ရပါတယျ ။ နောကျဆုံးတှငျ ပြားရညျ လကျဖကျရညျ ၁ဇှနျးနှငျ့ သံပုယိုရညျ ၃စကျခနျ့ ထပျထညျ့မှလေိုကျပါ ။ အားလုံးနှံ့စပျအောငျ မှပွေီးလြှငျတော့ မကျြနှာပျေါသို့ သုတျလိမျးထားလိုကျပါ ။ နာရီဝကျခနျ့ကွာလြှငျတော့ … Read more
ဒီနခေ့တျေထိ အသုံး ဝငျဆဲဖွဈတဲ့ ရှေးခတျေက အလှအပလြှို့ဝှကျခကျြမြား
February 25, 2022 by Achawlaymyar
ဒီနခေ့တျေထိ အသုံး ဝငျဆဲဖွဈတဲ့ ရှေးခတျေက အလှအပလြှို့ဝှကျခကျြမြား ဒိနျခဉျြ အသားအရအေတှကျ အသုံးဝငျတဲ့ ဒိနျခဉျြ ဒိနျခဉျြရဲ့ အသုံးဝငျပုံကို ရှေုးတုနျး ကတညျးက သိကွသညျ။ ရှေးတုနျး ခဉျြသှားတဲ့ နို့ခှကျကို လကျနဲ့ သှနျပွီး ဆေးကွောတဲမိ တဲ့အခါ နောကျနမှေ့ာ ၎င်းငျးလကျဟာ နူးညံ့နတောကို တှရေ့ငျး သူ့ရဲ့ အသားအရအေတှကျ အသုံးဝငျပုံကို သိလာခွငျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျသညျ။ ဂျေါဖီထုပျအရှကျမြား ဒီနညျးလမျး ကိုတော့ နို့တိုကျကလေးမိခငျတှေ ရှေးနှဈပေါငျး ရာခြီတညျးက အသုံးပွုလာကွတာပါ။ ရငျးသား နာကငျြခွငျး၊ နီးရဲ ဖူးယောငျနခွေငျးမြားကို ဂျေါဖီရှကျ အုပျပေးခွငျးဖွငျ့ ပြောကျကငျးစေ သညျ။ ကွကျဥ မကျဈ (ကွကျဥမကျြနှာဖုံး) ကွကျဥမကျဈ လုပျတဲ့နညျးမြား စှာရှိသောလညျး လိုရငျးကတော့ အတူတူပါပဲ။ ကွကျဥမကျဈက ဆံပငျတှကေို … Read more
မာလကာရှကျကို အသုံးပွုပွီး ဆံပငျဖွူတာတှေ နကျအောငျ လုပျနညျး
February 24, 2022 by Achawlaymyar
မာလကာရှကျကို အသုံးပွုပွီး ဆံပငျဖွူတာတှေ နကျအောငျ လုပျနညျး မဂျလာပါ ပရိတျသတျကွီးရအေခုပွောပွ ပေးခငျြတာကတော့ ဆံပငျဖွူ နတော ကိုပွနျနကျပွီး နကျမှောငျသောဆံပငျရဖို့နဲ့၊ဆံပငျ ပါးနတော တှကေို ထူလာ စဖေို့မာလကာရှကျကို အသုံးပွုနညျး လေး အကွောငျး တငျပွ လိုကျပါတယျ။ဆံပငျဟာ လူတဈယောကျ ရဲ့ ဒုတိယ မကျြနှာ ဖွဈလို့ ဆံပငျကို အငျမတနျ မှ ဂရုစိုကျ သငျ့ပါတယျ ။ဆိုရိုး စကား အရ မိနျးမ တို့ ဘုနျး ဆံထုံး လို့လဲ ဆိုရိုးစကား ရှိကွ ပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ အတှကျ ဆံပငျဟာ အလှနျ အရေး ပါလှ ပါတယျ အဘယျကွောငျ့ ဆိုသျော၊ဆံပငျရှညျ သောမိနျးကလေး က မိနျးကလေး ခငျြးပငျ … Read more
February 7, 2022 by Achawlaymyar
ပြိုမတေို့မကျြနှာလေးလှလှလေးမှာဝကျခွံတှစေဉျဆကျမပွတျထှကျနမေယျဆိုရငျအပွငျထှကျလို့အလှပွငျရငျလညျးအဆငျမပွေ၊မှနျကွညျ့တိုငျးလညျးစိတျမခမျြးသာ၊ကိုယျ့ကိုယျ ကိုလညျးယုံကွညျမှုမရှိတှဖွေဈနပေါလိမျ့မယျဝကျခွံတှမွေငျမကောငျးအောငျအမြားကွီးထှကျနတောမြိုးလညျးမဟုတျဘဲမကျြနှာပျေါမှာ ဟိုနားနညျးနညျး၊ဒီနားနညျးနညျးနဲ့အမွဲမပွတျ ထှကျနတောမြိုးပါဒါကွောငျ့ပြိုမတေို့မကျြနှာပျေါမှာအမွဲမပွတျနရောယူထားတဲ့ ဝကျခွံတှကေိုလုံးဝသကျသာစပွေီးမှနျကွညျ့တိုငျးစိတျခမျြးသာစမေယျ့နညျးလမျးလေးတှကေိုဖျောပွ ပေးလိုကျပါတယျဝကျခွံလေးတဈလုံး၊နှဈလုံးထှကျလာရငျလကျနဲ့သှားသှားညှဈခငျြပါတယျလုံးဝမညှဈပါနဲ့၊လကျနဲ့မကွာခဏထိတှခွေ့ငျးကဝကျခွံကိုပိုဆိုးစပွေီးအမာရှတျ ထငျးထငျးကွီးတှဖွေဈစပေါတယျဒါကွောငျ့လကျနဲ့လုံးဝမထိ၊မညှဈမိအောငျနပေမနကျတဈကွိမျညတဈကွိမျပုံမှနျမကျြနှာသဈပွီးပွီးခငျြး၊ဝကျခွံထှကျနတေဲ့နရောကို မိနဈအနညျးငယျ လောကျရခေဲကပျပေးပွီးကိုယျလုပျနကြေskin care အဆငျ့လေးတှကေိုသခြောလုပျပေးပါမကျြနှာသုတျပုဝါခေါငျးအုံးစှပျနဲ့အိပျယာခငျးကိုသနျ့အောငျထားပေးပါ တတျနိုငျရငျတဈပတျတဈခါလောကျလဲပေးပါနာရီဝကျလောကျလမျးလြှောကျပေးတာ၊ဒါမှမဟုတျကိုယျလကျလှုပျရှားမှုလေးတှလေုပျပေးတာနဲ့အိပျခြိနျလုံလောကျအောငျအိပျပေး တာကခန်ဓာကိုယျတှငျးကဇီဝရုပျဖွဈပကျြမှုကိုမှနျမှနျကနျကနျ လညျပတျစတောကွောငျ့မကျြနှာပျေါကဝကျခွံတှသေကျသာအောငျကူညီပေးပါတယျစိတျဖိစီးမှုတှအေမွဲဖွဈနရေငျ cortisol hormoneကိုမြားမြားထှကျစတောကွောငျ့ဝကျခွံကပြောကျတယျရယျလို့မရှိတော့ပါဘူးဒါကွောငျ့စိတျဖိစီးမှုလြော့နညျးအောငျစိတျအပနျးဖွတောမြိုးလုပျပေးပါ အဆကျမပွတျဖွဈနတေဲ့ဝကျခွံတှပြေောကျအောငျဒီနညျးလေးတှနေဲ့ပေါငျးတငျပါနနှငျးမှုနျ့အနညျးငယျကိုရအေနညျးငယျနဲ့ရောပွီးအနှဈဖွဈအောငျ လုပျကာဝကျခွံဖွဈနေ တဲ့နရောမှာလိမျးပေးထားလိုကျပါနာရီဝကျကွာရငျရနှေေးနှေးလေးနဲ့ဆေးခပြေးပါတဈနတေ့ဈကွိမျလုပျပေးလိုကျမယျဆို ပြိုမတေို့ကိုစိတျဒုက်ခပေးနတေဲ့ဝကျခွံတှလေုံးဝသကျသာသှားပါ လိမျ့မယျရှားစောငျးလကျပပျအတှငျးသားအနညျးငယျကိုယူပွီးပြားရညျအနညျးငယျနဲ့ရောမှကောဝကျခွံရှိတဲ့နရောမှာလိမျးပေးပါနာရီဝကျလောကျထားပွီးရအေေးနဲ့မကျြနှာသဈ ပေးပါတဈနတေ့ဈကွိမျပုံမှနျလုပျပေးရငျဝကျခွံအဆကျမပွတျထှကျနတေဲ့ပွဿနာကိုဖွရှေငျးပေးပါလိမျ့မယျအာလူးကိုအလှာလေးတှလေုပျပွီးဝကျခွံရှိတဲ့နရောမှာ၁၅မိနဈလောကျ ကပျထားပေးလိုကျပွီးရအေေးနဲ့ပွနျဆေးခပြေးပါညအိပျခါနီးတိုငျးလုပျပေးရုံနဲ့ဝကျခွံတှထေပျမထှကျအောငျတားဆီးပွီးသားဖွဈစမှောပါ credit